Inona ny Iexplore Exe? - Rakitra
Tena > Rakitra > Toerana Iexplore exe - valiny sy fanontaniana mahazatra
Toerana Iexplore exe - valiny sy fanontaniana mahazatra
Inona ny Iexplore Exe?
nyiexplore.exeNy rakitra dia antsoina hoe rakitra azo tanterahina ao amin'ny MicrosoftInternet Explorer. Ny fampifandraisan'ny mpampiasa sary nyiexplore.exeNy rakitra dia misy pejy Internet misy sary.Iexplore.exedia ny mpizaha tranonkala izay mifandray amin'ny Internet rehefa miditra amin'ny URL ao anaty bara adiresy hita ao amin'ny GUI ny mpampiasa.
Manao ahoana daholo! Ity lahatsoratra ity dia momba ny fanesorana ireo doka viralin'ny mpanamory toa an'i Google Chrome, MozillaFireox, Opera, Browser Yandex, Microsoft Edge ary Internet Explorer. Raha manokatra tabilao tampoka miaraka amin'ny doka ianao (ohatra:
Vulcan Casino), raha toa ny taby misy tranokala malaza (Yandex, VK, YouTube, Odnoklassniki) dia toa fenoina sora-baventy fanaovana doka na dokam-barotra manomboka mirehitra vantany vao manomboka ny browser. Midika izany fa voan'ny virus ny solosainanao. Ireo dokam-barotra rehetra ireo dia mampiadana ny solosainao ka tsy afaka hiasa amin'ny navigateur! Ohatra, nametraka programa maromaro avy amina loharano mampiahiahy aho.
fanondranana kalandrie hotmail
Vokatr'izany dia mahazo izao manaraka izao aho nefa tsy nahazo fampandrenesana: • Ny browser Amigo sy ny serivisy hafa avy amin'ny Mail.ru dia napetraka (Odnoklassniki, Vkontakte, Serivisy fanavaozana ny lozisialy mandeha ho azy, Unity Web Player) • Novaina ho Amigo ny navigateur default nataoko • novaina ho Mail.ru ny pejy fandraisan'ny mpitety tranonkala hafa; • Mampiseho ny sora-baventy amin'ny dokam-barotra foana ny mpizaha tany rehetra (ireto misy ohatra vitsivitsy).
Na izany aza, vao manomboka izao - mety hiharatsy kokoa ny raharaha amin'ny anao. Alohan'ny hanesoranao ny doka virtoaly dia azonao atao ny miverina amin'ny teboka fanarenana farany na mamerina amin'ny laoniny ny rafitrao amin'ny sary iray izay nahafahanao nanasongadina endrika toy izany tamin'ny solosainao, azonao atao ny mijery ireo lahatsoratra teo aloha mba hahitako ny fomba nanaovany azy Raha tsy izany dia hanana ianao hamafana tanana ny viriosy. Ity dia dingana lava sy mandreraka miaraka amina dingana maromaro: • Manadio ny Windows scheduler; • mamafa ny malware (viriosy); • manadio ny lisitry ny boot an'ny rafitra; • Manadio ny browser.
Ao amin'ny famaritana an'ity lahatsoratra ity dia afaka mandeha amin'ny ambaratonga irina ianao. Voalohany, esory ny solosaina avy amin'ny tamba-jotra ary zahao ny mpandahatra lahasa. Ny viriosy sy ny programa tsy ilaina matetika dia mamorona asa mandeha ho azy mba hampandeha ny fizotran'ny malware: • Misintona, mametraka ary manavao avy aminao sy ireo viriosy hafa; • Fanokafana an-keriny ny kiheba fanaovana dokam-barotra amin'ny mpizaha sns
Amin'ny fampiasana ny Task scheduler, ny viriosy iray dia afaka mametaka azy indray rehefa manandrana mamafa azy ianao Tasks, mankanesa any amin'ny Control Panel / Tools Administratives / Task scheduler. Tsindrio indray mandeha eo amin'ny famakiam-boky fandaharam-potoana ary tadiavo ny lisitr'ireo asa mifandraika amin'ny fizotran'ny malware (ny sasany amin'izany dia hita ao amin'ny famaritana an'ity lahatsoratra eto ambany ity). Raha ny amiko dia 'Find Journal' sy 'MailRuUpdater' izy ireo.
Fafao ireo lahasa ireo. Raha hanao izany, tsindrio havanana amin'ny lahasa, safidio ny 'Delete' ary hamafiso tsara amin'ny OK. Rehefa avy namafa ny asan'ny malware rehetra tao amin'ny mpandahatra lahasa ianao dia mankanesa any amin'ny Control Panel / Programs and Features ary alaharo ireo programa napetraka amin'ny datin'ny fametrahana farany.
Azonao atao ny mahita ny programa sy ny endri-javatra napetraka tsy fantatrao. Raha ny amiko dia ny 9 desambra 2017 no datin'ny aretina ary ireto ny programa napetrako irery: • Amigo browser; • Serivisy fanavaozana rindrambaiko mandeha ho azy; • Unity Web Player. Fafao daholo.
Mba hanaovana izany, tsindrio indray mandeha miaraka amin'ny bokotra havanana amin'ny programa ary safidio ny 'Delete'. Ny malware sasany dia tsy azo hamafana toy izao satria tsy hita ao amin'ny menio Programs sy Features. Atombohy ny Task Manager amin'ny alàlan'ny fanindriana ny tsikombakomba Ctrl + Shift + Esc.
Avy eo tsindrio ny 'More Details' ary sokafy ny kiheba 'Details' (ao amin'ny Windows 7 ity ny tabilao 'Processes') ary tadiavo izay fizotra mampiahiahy mandeha amin'ny solosainao. Raha ny ahy dia MailRuUpdater.exe ireo, mrupdsrv.exe avy amin'ny Mail.ru Update Service sns (jereo ny lisitra lava ao amin'ilay famaritana).
Avy eo tsindrio havanana amin'ny iray amin'ireo fizotra (oh: MailRuUpdater.exe), kitiho ny 'Filelocation' ary mariho ny lalana mankany amin'ity fampirimana ity (raha ho ahy dia Andrey Revchuk / AppData / Local / Mail. Ru).
Avereno ireo fihetsika ireo raha misy dingana mampiahiahy, avy eo avereno ny solosainao amin'ny Safe Mode (raha hijery ny fomba hanaovana izany, jereo ireo lahatsoratra teo aloha). Ao amin'ny Safe Mode, mandehana any amin'ny Control Panel / File Explorer Safidy, avy eo tsindrio ny 'View' ary safidio ny safidy 'Asehoy ireo rakitra miafina, lahatahiry ary kapila'. Esory ny boaty eo akaikin'ny 'Afeno ny rakitra rafitra miasa voaaro (Recommended)', avy eo ampiharo ny fanovana amin'ny lahatahiry rehetra.
Aorian'izay dia mankanesa any amin'ireo lahatahiry izay nanamarika ny làlan'izy ireo ary hamafa ireo rakitra sy lahatahiry noforonin'ireo fizotran'ny malware ireo, raha ny fahitako azy dia hitako ilay folder Mail.ru ao amin'ilay lalana “С: / Users / Andrey Revchuk / AppData / Local / ”Ary fafao izany. Aorian'ny famafana ireo viriosy, sokafy ny Task Manager, kitiho ny 'Start' ary zahao raha misy tsy mety.
Atsaharo ary hamafa izay dingana tsy ilaina rehetra. Mba hanaovana izany, tsindrio havanana eo amin'ilay laharana, safidio ny toerana misy ny rakitra ary fafao izany. Avereno ity fizotrany ity ho an'ireo fizotran-javatra mampiahiahy rehetra aorian'ny fanindriana ny Win + R, soraty ny 'Regedit' ary kitiho ny 'Enter'
Ireo viriosy sy programa tsy ilaina dia mamorona fidirana ao amin'ny rezistra mba hisintomana na hanavao ny fisie rehefa manomboka ny Windows. Ireo fidirana ireo dia hita ao amin'ny lakilen'ny fisoratana anarana HKEY_LOCAL_MACHINE sy HKEY_CURRENT_USER amin'ny làlana / Rindrambaiko / Microsoft / Windows / Dikan-teny ankehitriny ao amin'ny lahatahiry Run and RunOnce. Raha toa ka misy fisoratana anarana mifandraika amin'ny fizotran'ny malware ireo tsipika fisoratana anarana (Run and RunOnce) ireo dia hamafa azy ireo.
Mba hanaovana izany, kitiho tsara ny fisie ilaina (oh: Amigo) ary kitiho ny 'Delete'. Tadiavo avy eo ny fisoratana anarana ny anaran'ireo fizotran'ny malware.
Safidio ny 'Computer' ao amin'ny tonian-dahatsoratry ny rezistra ary kitiho ny 'Search' ao amin'ny 'Edit' kiheba. mail.ru) ary kitiho ny 'Find manaraka'.
Fafao ny tsipika fisoratana anarana izay ahitana ireo fizotrany ireo. Mba hanaovana izany, kitiho havanana amin'ny fisie takiana ary kitiho ny 'Delete'. Isaky ny famafana tsirairay dia tsindrio ny bokotra F3 (izany hoe avereno indray ny fikarohana ny fisoratana anarana malware amin'ny anarana toy izany.
fampiharana mpifaninana tena izy
Ity hetsika ity dia tokony averina mandra-pahatongan'ny mpampanonta ny rezistra tsy mahita fidirana malware amin'ny fikarohana nataonao. Mitandrema tsara - raha mahita iray Delete ny tsipika rafitra ao amin'ny tonian-dahatsoratra ianao dia tsy miasa intsony ny solosainanao, akatony ny tonian-dahatsoratra. Tsindrio avy eo ny Win + R, t Type 'msconfig' ary kitiho ny 'Enter'.
Sokafy ny kiheba 'Serivisy' ary safidio ny 'All Hide Microsoft Services 'ary jereo ny lisitra. Raha mahita serivisy mifandraika amin'ny viriosy na fizotry malware ianao, esory ireo boaty eo akaikin'ireo serivisy ireo ary kitiho OK. Raha ho ahy dia 'Mail.ru Update Service', 'Updater.Mail.Ru'.
Aorian'ny tsy hanaovanao azy dia mivoaha amin'ny Safe Mode ary avereno amin'ny laoniny mahazatra ny solosaina. Ny Sch ritt anao manaraka dia ny manamarina ireo hitsin-dàlan'ny navigatera eo amin'ny birao, ao amin'ny lozisialy sy eo amin'ny menio fanombohana. Indraindray ny viriosy na programa tsy ilaina dia manova ny soatoavina amin'ny tsipika kendrena amin'ny hitsin-dàlana.
Aorian'izany dia hiova ho tranokala tsy hainao ny pejy fanombohan'ny browser anao ary hanomboka amin'ny fikandrana vaovao maro ataon'izy ireo dokam-barotra. Mba hamahana ny olana dia tsindrio havanana ny hitsin-dàlana (ohatra ny Chrome browser) ary fidio Properties.
Jereo tsara ny sanda ao amin'ny tsipika kendrena amin'ny hitsin-dàlan'ny browser. Ho an'i Google Chrome, ny faran'ny tsipika dia tokony ho ny sandany. misy 'Chrome.exe' ary ny làlana dia tokony ho ao anaty fampirimana miaraka amin'ity programa ity.
Raha mampiseho ny lalana mankany amin'ny fisie hafa ny hitsin-dàlana fa tsy ny rakitra .exe (ohatra rakitra .url na .bat) na Raha toa ka misy adiresy URL an'ny tranonkala ny làlana (oh: http: / /virussite.com), dia tokony ovay ity lalana ity ho: • ho an'ny Windows 32-bit - “C: Program Files Google Chrome Application chrome.exe '; • ho an'ny Windows 64-bit - 'C: Program Files (x86) Google Chrome Application chrome.exe'.
Aorian'ny fanovana dia kitiho ny 'Ampiharo'. Azonao atao ny mahita ohatra ny sanda kendrena marina ho an'ny hitsin-dàlana avy amin'ny mpizaha toy ny Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer, Microsoft Edge ary Yandex Browser amin'ny famaritana an'ity lahatsoratra ity. Raha tokony hanova ny hitsin-dàlana ianao dia azonao atao ny mamafa azy ary mamorona lalana vaovao.
tsy afaka mamafa ny kb3035583
Avy eo dia tokony hamerina ny fikirakiran'ny mpitety tranonkala ianao. Ity fiasa ity dia: • Mamerina manamboatra ny pejy fandraisan'andraikitra; • Avereno ny fidirana haingana sy mizaha ireo pejin'ny rafitra; • hamaha ny kiheba rehetra; • Avelao ny rafitra hanafoana ny lohahevitra sy ny fanitarana rehetra; • Avelao ny rafitra hamafa ireo fisie vetivety rehetra (ao anatin'izany ny cookies). Hotehirizina ireo maripeo, tantara ary tenimiafinao.
Mba hanaovana izany ao amin'ny Google Chrome na ny browser Yandex, mandehana mankany amin'ny Settings / Asehoy ireo fandrosoana mandroso, avy eo tsindrio ny 'Reset Settings' ary kitiho ny 'Reset'. Ao amin'ny Mozilla Firefox, mankanesa any amin'ny menio Fampahalalana fanampiana / famahana olana, avy eo Diovy ny Firefox ary hamafiso ny fanapaha-kevitrao. Aorian'ny famerenanao ny Firefox, dia hiseho eo amin'ny birao ilay fampirimana misy fikirana fanamoriana taloha.
Raha ny voalaza dia mamorona backup eo amin'ny birao i Firefox (antsoina hoe 'Old Firefox Data') ary azonao atao ny mamerina amin'ny laoniny ny angona voafafa amin'ny alàlan'ny fampirimana ao amin'ny birao, raha sanatria very zavatra manan-danja ianao dia esory fotsiny ilay fampirimana. Tsy misy safidy famerenana mandeha ho azy ao amin'ny browser Opera, ka tsy maintsy hataonao amin'ny tanana. Mandehana any amin'ny menio, safidio ny 'About Opera' ary sokafy ny làlana mankamin'ny mombamomba ny mpampiasa sy ny cache ao amin'ny File Explorer.
Manamboara Close Opera ary hamafa ny atin'ny profil sy ny lahatahiry cache rehetra. Ity dingana ity dia hamerina ny toe-javatra Opera rehetra. Ao amin'ny Microsoft Edge, mandehana any amin'ny Settings ary eo ambanin'ny fizarana 'Clear Browsing Data', kitiho ny 'Safidio izay hamafana'.
Safidio ny 'Cookies sy tahirin-tranonkala voatahiry'. 'Ary' Data sy rakitra voatahiry ', avy eo tsindrio ny' Delete '. Ao amin'ny Internet Explorer, mandehana any amin'ny Properties Service / Browser, avy eo sokafy ny kiheba Advanced Settings ary kitiho ny 'Reset' (azonao atao ihany koa ny mamafa ny mombamomba anao amin'ny fisafidianana an'ity safidy ity).
Tokony alefa indray ny solosainanao mba hisy vokany ny fanovana. Farany, ny fisie 'Host' dia tsy maintsy zahana. Mba hanaovana izany dia atombohy ny Notepad amin'ny maha-mpitantana anao, safidio ny 'Open' ao amin'ny menio 'File' ary alefaso ny fampisehoana ireo rakitra rehetra, avy eo mandehana any amin'ny 'С: / Windows / System32 / mpamily / sns' ary sokafy ny fisie 'host'.
Raha manomboka tsy misy hash ny tsipika, esory izy ireo ary tahirizo ilay rakitra. Raha tianao ity lahatsoratra ity, kitiho ny bokotra 'Like' etsy ambany ary misoratra anarana amin'ny fantsonay hahitanao misimisy kokoa. Misaotra anao nijery ary mirary soa!
Virosy ve ny iexplore exe?
Iexplore.exeno azo ampiharina amin'ny tranokala 'Mpikaroka Internet'avy amin'i Microsoft. Tsy aviriosyna ny trojan iray fa ny malwares na spywares sasany dia tsy manandrana maka tahaka ireo rakitrao ka aza hadino ny manamarina izany. azafady manandrama manidy ny rehetraiexplore.exeamin'ny alàlan'ny mpitantana ny lahasa.
kahie onenote default
Aiza ny toerana misy Internet Explorer Windows 7?
Ampiasao nyInternet Explorerhitsin-dalana avy amin'ny Start Menu
Ao amin'nyam-baravarankely10, sokafy ny Start Menu ary mandehana amin'ny fampiharana rehetra ->am-baravarankelyFitaovana. Any no hahitanao ny hitsin-dàlanaInternet Explorer. Ao amin'nyWindows 7, sokafy ny Start Menu, kitiho ny 'All Programs' ary avy eo diaInternet Explorer.27 jona 2017
Tongasoa eto amin'ny windows 7channel ofisialy ary anio dia hasehonay anao ny fomba hahazoana Internet Explorer 10 ho an'ny Windows 7 raha tsy maika ny hanana kinova Internet Explorer vaovao ianao na raha tsy mampiasa Internet Explorer fotsiny ianao. tsy mila misintona azy mazava ho azy ary ho ao anatin'ny iray amin'ireo fanavaozana Windows io amin'ny herinandro ho avy, fa raha te-ho haingana ianao ary manana Internet Explorer 10 izao, ny hany sisa ataonao dia mandehana mankany amin'ny downloadmicrosoft.com ary jereo ao amin'ny foibe fampidinana ao amin'ny ankavanana ambony ary soraty ao anaty boaty fikarohana kely fotsiny dia ampidiro ny Internet Explorer 10 ho an'ny Windows 7 ary ny zavatra voalohany hitanao dia eo amin'ny pejy Internet Explorer 10 ho an'ny Windows 7 ao amin'ny Downloads. Tadidio fa mila Service Pack 1 ao amin'ny Windows 7 ianao raha te hanana izany Internet Explorer 10 dia tena zava-dehibe, raha tsy fantatrao raha manana Service Pack 1 ianao dia mandehana fotsiny amin'ny menio fanombohana anao, kitiho ny tontonana fanaraha-maso anao ary ampio ny System ary Security kiheba r-hafainganam-pandeha ambanin'ny vakizoro System ary eo amin'ny tranga misy ahy dia ho hitanao eo afovoan'ny OS Type 32-bit OS afovoany, fa mety manana OS 64-bit ianao.
Tena ilaina ny mahafantatra fa misy fomba roa fampidinana Internet Explorer 10 raha mametraka ny fanontaniana izy. Ny fonosana lehibe azonao sintonina dia mitaky anao hahafantatra raha manana kinova 64 na 32 ianao na eto ianao manana ity fampidinana 22 megabyte kely ity izay efa ao anaty kinova tsara, ny x86 ho an'ny kinova 32-bit dia misy antoka Azo antoka fa manana ilay ianao tsara 64- na 32-bit, raha miasa amin'ny 64-bit ianao dia tokony hilaza x64 fa tsy x86 ary eto dia manana io varavarankely kely io ianao rehefa manao ny fisintomana dia apetraho You Internet Explorer 10. Rehefa tsindrio io dia ho hitanao eto ity varavarankely ity izay manondro fa napetraka ny Internet Explorer 10.
Manomboka amin'ny fisintomana ireo fanavaozana ilaina amin'ny tranokala Microsoft Onestop izany, azafady, ary avy eo dia misintona ny Internet Explorer mihitsy izy alohan'ny hamaranana ny fametrahana azy amin'ny solo-sainanao dia efa nametraka izany tamin'ny Windows 64x64 taloha Windows 7 aho ary naharitra 15 minitra ny fitambarany. saingy mety hiova izany arakaraka ny hafainganan'ny Internet Explorer anao. Noho izany dia zava-dehibe ny hahafantarana fa mety maharitra ela kokoa raha toa ka miadana ohatra ny fifandraisanao amin'ny Internet, ary mety ho miadana kokoa amin'ny solosaina miadana kokoa koa izy io. Solo-saina fototra io fa mety ho haingana kokoa miankina amin'ny fanamboarana anao koa.
Ny sisa amin'ny fizotrany dia tsotra be. Hametraka ny fanavaozana Internet Explorer fotsiny izy avy eo ary hangataka anao hamerina fotsiny ny solo-sainao amin'ny kinova 64-bit fa tsy nangataka tamiko ny hamerenana ny solosainako heveriko fa tsy tadidiko ao an-tsaiko, fa misy tsara sendra ny fanavaozana Internet Explorer dia handrisika anao hamerina ny solosainao ary tsotra be izany fa tsy misy fanontaniana apetraka aorian'ny fametrahana ny zava-drehetra ary maniry ny hisian'ny solosainao aorian'ny famerenana ity fampidinana ity. Izao dia manana Internet Explorer10 napetraka ao amin'ny solo-sainanao Aza matahotra Internet Expl na 10 Raha manontany tena ianao, eny, dia taitra aho rehefa nifindra avy tany Explorer 8 ka hatramin'ny Explorer ary 9 ary maro ny olona no nanao an'io satria Tena nanova ny UI sy ny endrik'izy ireo amin'ny Internet Explorer izy ireo ary namoy olona marobe, fantatrao fa very ny fitaovany ary tsy fantatrao hoe aiza no ahazoana ny ankafizin'izy ireo ary fantatrao ireo olona very olona maro, ireo iza no tena tsy mahay teknolojia no mora very rehefa ovaina ny zavatra, ka mazava ho azy fa iray amin'ireo zavatra manandanja indrindra amin'ny fanavaozana ny rindrambaiko, hanova ny lalako ve izany? Ny zavatra tokony hatao sy ny mahafinaritra ary ny Internet Explorer 10 dia raha efa ao amin'ny Explorer 9 ianao dia milay be satria tsy hiova be izany.
Internet Explorer 10 dia hitazona ny biraonao sy ny fikiranao rehetra ao amin'ny Internet Explorer 9 ka tsy mila izany ianao. Tena matahotra aho fa tena fantatro fa efa misy fivoarana izao. Marina fa ny Internet Explorer dia ampahany lehibe amin'ny rindrambaiko ho an'ny Windows ary toy ny zavatra tsy mety rehetra mety tsy mandeha dia manana tantara mahatsiravina vitsivitsy momba ny solosainao manana olana amin'ny Internet Explorer aho na tsy mandeha amin'ny booty aorian'ity Expert 10 ity fa amin'ny ankapobeny dia manana aho hita zavatra mihazakazaka tsara amin'ny lamaody britanika.
Nanavao ny tenako ho milina dimy aho hijerena folo ary ny hany azoko lazaina dia tsy nanana olana tamin'ny iray amin'ireo masinina nohavaozina aho ary raha tsy azonao antoka na hifindra ho any Explorer 10 ianao na hitanao fa milaza izany avereno indray izao, ka natombokao ny solosaina. Ka raha tsy azonao antoka raha te hanavao ianao dia zahao ny iray amin'ireo lahatsoratro napetrako an-tserasera Ny kinova farany an'ny FirefoxChrome notsapaina tamin'ny Internet Explorer 10 ary noho ny hafainganan'ny tranonkala dia azoko lazaina aminao fa ny Internet Explorer 10 no tena izy Browser haingana indrindra azonao atao amin'ny PC-nao izao na roa izao ho an'ny Windows 7 izay tsara tarehy be ary aretina raha vao hitanao ny dikanteny tsara ao amin'ny tranokalan'i Microsoft sisa no ataonao dia tsindrio eo aminy. Milamina tsara ny zava-drehetra.Tsy misy fanontaniana apetraka marina mora ary raha vantany vao miverina miverina tsara ny solosainao dia hanana Internet Explorer 10 vaovao napetraka eo amin'ny solo-sainao ianao. Ho fampahalalana bebe kokoa momba ny Windows 7 sy Explorer 10 ho an'ny Windows 7 ity, zahao ireo lahatsoratra ato amiko, maro ny horonan-tsary amin'ny Internet ary handefa vitsivitsy aho lahatsoratra ao amin'ny Internet Explorer 10 ary miresaka momba ny endri-javatra sy ny asany Safidy ary raha tianao ireo lahatsoratra ireo dia tsindrio ny bokotra Subscribe eo an-tampon'ny efijery dia ampahafantaroo ireo lahatsoratra an-tserasera .Raha manana comm ianao ents na fanontaniana, azafady mba ampahafantaro anay ary manantena ny hiverina amin'ny fantsona ofisialy Windows 7, veloma
Aiza no hahitana iexplore.exe ao amin'ny Windows 10?
Fomba iray hafa ahitanao azy amin'ny alàlan'ny fampiasana ny boaty Search ao amin'ny Taskbar, kitiho Internet Explorer, kitiho havanana ary kitiho ny Pin to Taskbar. Farany, nefa tsy farany, amin'ny fampiasana ny baiko Run. Tsindrio ny bokotra Windows + R. Type: iexplore.exe. Hit Enter. Dia izay. Misoratra anarana.
Aiza no ahitako Internet Explorer amin'ny solosaiko?
Azonao atao ny miditra amin'ny Internet Explorer amin'ny fomba roa: rehefa hitanao io dia tsindrio havanana ary kitiho ny pin to Taskbar Fomba iray hafa hahitanao azy amin'ny fampiasana ny boaty Search ao amin'ny Taskbar, kitiho ny Internet Explorer, kitiho ankavanana ary kitiho ny Pin to Taskbar Farany, nefa tsy farany, amin'ny fampiasana ny baiko Run.
Inona ny fizotry ny fiafaran'ny iexplore.exe?
Ny fizotry ny background dia iexplore.exe (Amin'ny litera kely) Amod Matetika dia mpikaroka Internet izy io fa raha mbola tsy nosokafanao IE ary mbola manana azy io dia zavatra hafa. Ny fahafantarana ny doka no tombantombako satria mampipoitra ny baraovana.
Ahoana ny fomba hidirako amin'ny mpikaroka Internet?
Azonao atao ny miditra amin'ny Internet Explorer amin'ny fomba roa: tsindrio Start & gt; Ny fampiharana rehetra ary zahao eo ambanin'ny Windows Accessories. Raha vantany vao hitanao izany dia tsindrio havanana ary kitihoMametaka amin'ny Taskbar. Fomba iray hafa ahitanao azy amin'ny alàlan'ny fampiasana ny boaty Search ao amin'ny Taskbar, kitiho Internet Explorer, kitiho havanana ary kitiho ny Pin to Taskbar.